Garoonkii Diyaaradaha Caalamiga oo isku badalay goob dagaal (Sawiro/Video) - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Garoonkii Diyaaradaha Caalamiga oo isku badalay goob dagaal (Sawiro/Video)
Garoonkii Diyaaradaha Caalamiga oo isku badalay goob dagaal (Sawiro/Video)
Sida aan saakay horay idinkuugu soo tabinay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka dhacday dagaal gacan la hadal ah u dhexeysay ciidamo ka tirsan NISA iyo shaqaalaha waaxda hay’adda socdaalka.
“Adeer hadii maanta raga ku dagaalay garoonka dhexdiisa ay qoryo ama bastoolado hasyan lahaayeen, dad badan baa dhiman lahaa, dalkaan faraha ayuu ka sii baxayaa, waxaana ka sii daran waxa soo socda, hadii aan wax laga badalin xaalada uu hada ku jiro”. Sidaas waxaa yiri shaqsi kamida dadkii ku sugnaa garoonka oo safar u ahaa dalka dibadiisa.
Dagaalka maanta ayaa sababay in muddo kooban ay hakad gasho shaqada garoonka Aadan Cadde. Sidoo kale waxaa gacan ka hadal-kaasi ka dhashay xaalad halis ah, waxaana dhaawacyo fudud ay soo gaareen qaar ka mid ah shaqaalaha, halka ay burbureen agabyo yaallay xafiisyada lagu dhex-dagaalamay ee gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Khalalaasahan ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhalatay, kadib markii shaqaalaha garoonka iyo ciidanka NISA ay isku qabteen dad ajaaniib ah oo NISA u socday, kuwaas oo loo diiday inay gudaha usoo galaan dalka, iyadoo aan la hubin waxa ay yihiin & ujeedka socdaalkooda.
Sidoo kale intaasi ku daraya in goobta ay shaqaaqadu ka dhacday uu goor dambe tegay taliyaha hay’adda socdaalka jinsiyadaha, Maxamed Aadan Koofi oo xalliyey arrintaasi, waxaana si caadi ah kusoo laabtay dhaq-dhaqaaqa garoonka Aadan Cadde. Arrintan ayaa sababtay walaac xoogleh oo soo wajahay shaqaalaha kala duwan ee garoonka ka howl-gala dadka kale ee safraya ama kasoo dagaya garoonka Muqdisho.